SIDEE U ARAGTAA JACEYLKA | WHEELIYE.COM
SIDEE U ARAGTAA JACEYLKA
Posted on December 28, 2009 by itb
Sidee u aragtaa jacaylka? maqaalkan maantu waa mid ka duwan kuweenii hore waayo waxaa jira ama la arkaa in dadka dunida ku nool mid walba uu leeyahay aragti gaar ah oo fikradooda iyo muuqaalkooda aragtiyeed aanay sinyeyn wuxuu qof walba wax ku cabiraa wixii ay markaas maskaxdiisu siiso waxaa la arkaa oo badanaa soo noqnoqda in laba lamaane ay jacaylka ku heshiin waayaan kadibna ku kala tagaan taas oo ay keentay aragtiyaha kala duwan ee ay ka qabaan jacaylka.
Dhab ahaantii jacaylku waa nolol ka duwan nololaha kale ee aduunka korkiisa waan mid qofka binu aadanka ah tusta xaqiiqada iyo hiyiga ama himilada uu u nool yahay ee ay noloshu tahay qofka waxay ka dhigtaa wax uuna ahayn iyada oo ay taasi jirto ayaa misana dad badan oo aaminsan jacaylka dhabta ah ay misana u arkaan si gooni ah.
hore ayey taasi u dhacday waayo laba qalbi wax ku jiraa isku mid ma aha hadab maanta maqaalkeenu wuxuu soo bandhigayaa in qof walba oo jacayl hayo ama doonaya in uu ogaado fanka iyo micnaha jacaylku uu soo cadeeyo isaga oo soo qeexaya aragtida iyo sida uu u arko ama uu u aaminsan yahay jacaylka ka jira dunida ama ka soo wajahay hadii uusan hada jacayl hayn xitaa ka uu ku tamaniyayo in uu sameeyo sida uu u eegyahay.
Qoraa ahaan aragtiyahani waxay ina tusi doonaan maqaalkeena danbe inaga oo soo qaadaneyna qof walab sida uu u arko tobanka ugu tayada sareeya iyo sida markaasi aan meel u dhigi karno ama doodaha badan ee soo wajaha dadka is jecel kala duwanaanta aragtida jacaylka aan xad ugu helno
wixii intaasi dheer ee faahfaahin ah waxaad noogu soo diraysaan wehlie’s blog
Qoraaga fikirkan leh waa
Cumar cabdi hanad yare
« FARIIMAHA JACEYLKA HEESAHA JACEYLKA »